Ndeapi makambani makuru eAustralia? | Absolut Kufamba
Louis Martinez | | Ositireriya
Ndeapi makambani makuru eAustralia? Uyu mubvunzo hauwanzoitika kunze kwenzvimbo dzakasarudzika dzehupfumi Izvi zvinokanganiswa nenyaya yekuti nyika yegungwa inoita kunge iri kure zvakanyanya kwatiri uye isu tinoziva zvishoma nezvayo.
Nekudaro, iwe unofanirwa kuziva kuti Australia ine rent pamunhu yakakwirira kudarika iyo yeGerman, United Kingdom neFrance. Uye zvakare, inotora yechipiri, mushure Norway, in Yekuvandudza kwevanhu Index uye nzvimbo yechitanhatu mune iyoyo ye hupenyu hwehupenyu yakagadzirirwa nemagazini 'Iyo Economist'. Kune izvi zvese, kuziva kuti ndeapi makambani makuru eAustralia kwakakosha munyika yanhasi yepasi rose.
1 Ndeapi makambani makuru eAustralia? Kubva kumigodhi kuenda kubhengi kuenda kune hutano
1.1 BHP Bhiriyoni
1.2 Commonwealth Bank yeAustralia
1.3 Rio Tinto Boka
1.4 Woolworths Boka
1.5 Iyo kambani Westpac Banking Corporation
1.7 Westfarmers, mutengesi pakati pemakambani makuru eAustralia
1.8 Iyo kambani Telstra Corporation Limited
1.9 Transurban Boka
1.10 Amcor Limited, kurongedza kugadzira imwe yemakambani makuru eAustralia
Ndeapi makambani makuru eAustralia? Kubva kumigodhi kuenda kubhengi kuenda kune hutano
Makambani makuru eAustralia anotora zvikamu zvakasiyana zvehupfumi, asi vese vanogovana simba rakakura muminda yavo yekuita. Tichakuratidza mamwe emakambani aya.
Icho chiri pamusoro imwe yemakambani makuru emigodhi munyika. Yakazvarwa mu2001 kubva mukubatanidzwa kweBritish Bhiriyoni uye wekuAustralia Akaputsika Chikomo Muridzi. Iwo mahofisi makuru arimo Melbourne, asi ine vamiriri munyika makumi maviri neshanu, umo mainoburitsa zvicherwa zvakaita se iron, mangoda, nickel uye kunyange bauxite.
Gore rapera akataura mari yaiwanikwa 46 madhora mabhiriyoni emadhora, pamwe neinofungidzirwa purofiti yezvishoma isingasviki hafu, kutenderera mabhiriyoni makumi maviri emadhora.
Bazi reCommonwealth Bank yeAustralia
Commonwealth Bank yeAustralia
Sezvauri kuona kubva kuzita rayo, ibhangi rinoshanda, kwete chete munyika yegungwa, asiwo mune vamwe vese vari munzvimbo iyi, pamwe ne Asia uye kunyange mukati United States y Great Britain.
Mumakwikwi akaomarara nerimwe bhanga hombe munyika, iyo Nyika yeAustralia, Commonwealth yakakura kudarika iyo nemabhizimusi. Gore rakapera rakazivisa mari yaivepo 30 mabhiriyoni emadhora eAustralia, ndiko kuti, angangoita mabhiriyoni makumi mashanu emadhora.
Rio Tinto Boka
Isu tinodzokera kumabasa emigodhi kukuudza nezve iyi kambani iri pakati pemakambani makuru eAustralia. Dzimbahwe rayo richiri muLondon, asi rakazvarwa kubva mukubatanidzwa kweBritish Rio Tinto-Zinc Corporation, ine zvimbambaira kuSpain, neAustralia Conzinc Rio Tinto.
Es kambani hombe pasi rose yemigodhi yemarasha uye makore mashoma apfuura yakaedza kutengwa neBHP Bhirioni, iyo yatichangobva kukuudza nezvayo. Zvisinei, kuvhiya hakuna kupera. Muna 2020, Río Tinto Boka rakashuma mari dzinosvika US $ 45 bhiriyoni.
Iyo inobata imwe yenzvimbo dzekutanga mune kupatsanurwa kwemakambani e biotechnology. Pakati penzvimbo dzayo dzekugadzira ndedze majekiseni, akakosha kwazvo nhasi, asiwo zvigadzirwa zvinobva muplasma uye kumwe kumutsiridzwa kwemasero. Yakasikwa muna 1916 nehurumende yeAustralia pachayo, asi yakapihwa vanhu vayo muna 1994.
Inoshandisa vanhu zviuru makumi maviri nezvishanu uye gore rapfuura yaive nemari ye anenge mabhiriyoni gumi emadhora dzayo dzinenge zviuru zviviri zvaive mabhenefiti. Nezve yavo misika capitalization, ine kukosha kwemabhiriyoni zana nemakumi mashanu emadhora.
Westpac Banking Hofisi
Iyo kambani Westpac Banking Corporation
Zvekare bhangi rinoonekwa mune ino runyorwa iyo inopindura kune ayo ari makuru makambani eAustralia. Yakagadzwa mu1817, Western pacific (zvichireva Westpac) yakatsaurirwa kune ese echinyakare uye ezvokutengeserana uye emabhangi emabhizinesi, manejimendi manejimendi uye kubhengi kwenzvimbo.
Iyo zvakare ine matavi mu New Zealand. Nezve kukosha kwayo kwakakosha mumusika, ingangoita mabhiriyoni makumi mapfumbamwe emadhora eAustralia. Mari yako yakawanda muna 90 yaive anenge mabhiriyoni makumi maviri nemaviri uye purofiti yacho yaive madhora mabhiriyoni mana emadhora eAustralia. Kana vari vashandi vayo, ine zviuru makumi mana.
Zvinoitwa nekambani iyi zvine chekuita nekubhengi, kunyangwe mune zvazviri neizvo zve investments. Iyo ine huvepo munyika makumi maviri neshanu uye ine vanopfuura zviuru gumi nevane vashandi. Zviri iyo hombe maneja yezvivakwa maneja wepasi, sezvo ichikwanisa kutenderedza 495 mabhiriyoni emadhora murudzi urwu rwefuma.
Mari yavo yemusika inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nematatu uye, muna 53, yakazivisa madhora mabhiriyoni matatu emadhora. Kambani iyi ine simba kwazvo zvekuti vezvenhau veAustralia vakaitumidza kuti "Fekitori yeMillionaire."
Westfarmers, mutengesi pakati pemakambani makuru eAustralia
Kana makambani apfuura akange akazvipira kumigodhi, kubhengi uye nenyaya dzehutano, uyu anoita kudaro retail. Kunyanya, inotengesa zvigadzirwa zvemakemikari nemaindasitiri, mafetiraiza uye, sezvo yakawana boka reColes, zvakare chikafu.
Coles Group supamaketi, inotsigira yeWestfarmers
Yakatangwa muna1914 semubatanidzwa wevarimi, parizvino inoshandisa vanhu vanopfuura zviuru zana. Muna 2020 yaive nemari yakawanda ye anenge mabhiriyoni gumi emadhora, ine purofiti ingangoita yeanenge maviri.
Iyo kambani Telstra Corporation Limited
Iyi runyorwa rweayo ari makuru makambani eAustralia haigone kushayikwa, imwe yakatsaurirwa kune iyo kutaurirana. Kunyanya, inotengesa yakagadziriswa uye nhare mbozha, Internet uye kubhadhara terevhizheni masevhisi. Iyo inonyanya kukosha yeavo anoshanda munyika yegungwa, iine musika capitalization madhora anosvika mabhiriyoni makumi mana nemashanu.
Muna 2019 yaive nevashandi vangangosvika zviuru makumi maviri nezviviri uye mari yayo yegore rose iwo akatenderedza makumi matatu emabhiriyoni emadhora kuti uwane mambure angangoita mana.
Australia inyika hombe, ine anopfuura makiromita manomwe emamirimita. Naizvozvo, hazvizokushamisa iwe kuti kambani yakazvipira kune kuvakwa uye mashandiro emigwagwa mikuru Icho chiri pakati pezvakakura kwazvo munyika.
Uye zvakare, Transurban inoshandawo mu Kanadha y United States. Mari yemusika wayo iripakati pemabhiriyoni makumi mana nematatu emadhora uye yakasikwa muna43. Parizvino ine vashandi vangangosvika chiuru chimwe nemazana mashanu uye mari yakazara iwo akatenderedza makumi matatu emabhiriyoni emadhora nemubhadharo wemambure wepakati pechuru.
Telstra Runhare Chitoro
Amcor Limited, kurongedza kugadzira imwe yemakambani makuru eAustralia
Iyi kambani yakatsaurirwawo kutakura, kunyangwe mune kwayo chikamu chekupakata. Iripo mune makumi mana nyika, kusanganisira España, uye ine mutengo wemusika unosvika madhora makumi maviri nemanomwe emadhora. Iyo ine vangangoita zviuru makumi matatu nezvishanu vashandi uye mari yakazara ye anenge mabhiriyoni gumi emadhora, nepo purofiti yemambure iri kutenderera mamirioni gumi nemazana mashanu
Mukupedzisa, dai iwe wanga uchinetseka ndiwo makambani makuru ekuAustraliaIwe watoona kare kuti ndezvavo, zvakanyanyisa, kune zvikamu zvakaita sekuchera, kubhengi uye kutakura. Zvisinei, mamwe makambani makuru, akadai se CLS Yakatemerwa, vari kuita kugadzirwa kwehutsanana zvigadzirwa kana, se Goodman boka, kune nyika yebhizinesi rezvivakwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Ndeapi makambani makuru eAustralia?